Computers & Technology » ဒီနေ့ ကလိ မိသမျှ	72
Posted by Anzartone on Feb 22, 2012 in Computers & Technology, Know-How, DIY | 72 comments
candle . says: အော်..ဂေဇက်မှာဒီလိုလည်းရှိတယ်ပေါ့..
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 311
candle . says: အဲ..အဲ..အမြန်ဆုံးကူညီကြပါအုံး
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1432
cobra says: မသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်အထောက်အကူဖြစ်တာပေါ့
ခင်ဇော် says: အထု ပြောင်းသွားတဲ့ ဒီဇိုင်း နဲ့ အညီ လမ်းညွှန်လေး လုပ်ပေးပါအူးးးး :-D
TNA says: ကျေးဇူးအကြီးကြီးပါ စမ်းကျိလိုက်ပါမည် အံဇရာရေ
TNA says: အားလေးကိုမေးထဲ ဖိုင်လေးနဲ့ပို့ချင်ဘူးလားဟင်။ ခုကူးနေတာကူးမရလို့။ Word file ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။
manawphyulay says: အရင်ဟာထက် အခုပြောင်းတဲ့ဒီဇိုင်းလေးလည်း လုပ်ပေးပါဦး။
La Yeik says: အူးလေး….မီး ဒီနေ့ title မပေးမိပဲနဲ့ Publish လုပ်လိုက်တာ ဘာမှပေါ်တော့ဘူး….ကောင်လေးလို့ title ပေးပေးပါအူး…မီး တော့ လုပ်လို့ရဘူး ဖစ်နေတယ်…ကယ်ဂျဘာအူး….
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ဟယ် အံစရာ ကို အူးလေး တဲ့ ဆိုးပါ့အေ
အဲလိုခေါ်ရင် လုပ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး မြန်မြန်ပြောင်းခေါ်လိုက်
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: ဟုတ်ဒယ် … ပြောလိုက် ပြောလိုက် ..
La Yeik says: အူးလေးလို့မှမခေါ်ရင် တူ့ချစ်ချစ်က မီးကို လာရိုက်မှာ ချိုးလို့ဘာ…စိတ်မဆိုးဘာနဲ့ အူးလေး…စိတ်ကောင်းရှိမှန်း မီးသိပီးသားဘာ…
aye.kk says: ကျေးကျေးပါ အံအံ ။။
veryloveman says: ကျွန်တော် မန်ဘာအသစ်ပါ ပရဟိတစိတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ post တစ်ခုတင်လိုက်ပါတယ် ရောက်မရောက်ဆိုတာ ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲခင်ဗျာ